Goorta lagu dhawaaqayo heshiiska uu xiddiga Chelsea ee Eden Hazard ugu biirayo kooxda Real Madrid oo daaha laga rogay – Gool FM
Goorta lagu dhawaaqayo heshiiska uu xiddiga Chelsea ee Eden Hazard ugu biirayo kooxda Real Madrid oo daaha laga rogay
(London) 14 Maajo 2019. Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay si rasmi ah ugu dhawaaqso inay la soo wareegtay Eden Hazard kaddib markii uu ciyaaro kulankiisii ugu dambeeyey ee Chelsea xilli ciyaareedkan.
Weeraryahanka xulka qaranka Belgium ayaa dalab kale loo soo bandhigay horraantii todobaadkan, waxaana ay noqon doontaa xilli ciyaareedkii ugu dambeeyey oo uu u ciyaarayo kooxda ka dhisan garoonka Stamford Bridge.
Wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee L’Equipe ayaa warinaya in xiddigan oo muddo dheer ay Real Madrid suuqa ka doonaysay uu heshiiskiisu gabagabo ku dhow yahay, iyadoo lagula wareegayo adduun dhan 86 milyan oo gini.
Hazard ayaa heshiiska uu ku aadayo kooxda Real Madrid waxaa lagu dhawaaqi doonaa 30-ka bishan May kaddib marka uu Chelsea u ciyaaro kulanka Final-ka Europa League oo ay ka horjeedaan naadiga Arsenal.
Intii lagu guda jiray todoba xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa galbeedka Magaalada London, Hazard ayaa u saftay 351 kulan kooxda Blues, waxaana uu kula guuleystay shan koob oo ay ku jiraan labo horyaalka Premier League oo uu la qaaday 2015 iyo 2017.
Ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa la warinayaa inay Chelsea soo qaadan doonto si uu u bedelo booska uu ka baxayo Hazard, halka Christian Pulisic uu sidoo kale kaga soo biirayo Blues naadiga Borussia Dortmund.
Waa tee kooxda ka dhisan Ingiriiska ee amaahda ku soo qaadanaysa weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Gareth Bale?